Andry Rajoelina : Miliardera noho ny ràm-bahoaka -
AccueilSongandinaAndry Rajoelina : Miliardera noho ny ràm-bahoaka
Andry Rajoelina : Miliardera noho ny ràm-bahoaka
06/12/2018 admintriatra Songandina 0
Ny ràn’ireo vahoaka madinika sy zanaka ambany tanàna, maty natao sorona teny Ambohitsorohitra ny faha-7 febroary 2009 no naha miliardera an’i Andry Rajoelina, loharanon-karenan’i Mamy Ravatomanga.
Inona no mba sitraka azon’ireo zanaka ambany tanàna, nanana havana maty nataon’ny TGV sorona teny Ambohitsorohitra ny faha-7 febroary 2009? Nisy zanaka ambany tanàna lasa minisitra ve nandritra ny Tetezamita, nisy zanaky ny faritra iva lasa miliardera ve nandritra ny fitondrana HAT? Firy tamin’ireo mpitarika ireny zana-bahoaka teny amin’ny faritra iva ireny no mba nahazo “audience” tamin’i Andry Rajoelina taorian’ny nahazoany fahefana?
Ny ràn’ireo zana-bahoaka sy zanaky ny faritra iva maty natao sorona nandritra ny krizy 2009 no naha miliardera an’izany Andry Rajoelina izany, ary mbola ny ràn’ireo zanaka ambany tanàna ihany koa no loharanon-karenan’i Mamy Ravatomanga, nahatonga ny Panama papers namoaka ilay lisitra milaza ny anaran’ireo mpanankarena indrindra folo eto Madagasikara. Tao anatin’ny roa taona monja dia efa maherin’ny arivo miliara ny vola azon’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga avy tamin’ny ràm-bahoaka. Poron’izany avy, haverina eto hatrany ireo trano be mitentina 100 Miliara atsy Frantsay nogiazan’ny PNF.
Tompon’ny vola manontany ny ory tokoa izany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga izany amin’izao fotoana. Mba efa nitsidika na koa namoaka na ariary aza ho an’ny zanaka ambany tanàna ve izy ireo talohan’izao fifidianana sy propagandy izao? Mba mahafantatra ny fahoriana mahazo ireo renim-pianakaviana very asa vokatry ny fanonganam-panjakana lasa “makorelina” tsy fidiny ve izany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga izany?
Eo amin’ny villa Pradon ambany mason’i Mamy Ravatomanga mihitsy ‘nge no mivaro-tena ireo renim-pianakaviana very asa noho ny “coup d’état” tamin’ny 2009 e! Manaporofo indray ny efa nambara tetsy ambony fa loharanon-karenan’i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina ny ràm-bahoaka, ny ràn’ireo zanaka ambany tanàna ambakain’izy ireo amin’ny “tee-shirt” ankehitriny.
Aoka izay kosa ilay fanararaotana tsinaim-bahoaka e! Maika amin’ny famerenana ireo miliara lany tamin’ny fampielezan-kevitra sy hanonitra ireo miliara vidin’ny trano be nogiazan’ny Fitsarana frantsay ve dia hanararaotra ny fahalemen’ny vahoaka madinika tahaka izany?
Miezaka mampahafantatra, sy mampihatra ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana avokoa ireo mpitandro ny filaminana amin’izao ankatoky ny fandraisana nyfihaonana an-tampon’ny Frankofonia izao. Hentitra tokoa izy ireo amin’ny fampanarahan-dalàna ireo mpampiasa ny lalana amin’ny ankapobeny. Ho ...Tohiny
Repoblika Federalin’i Alemaina : Nanome 65 tapitrisa Euros an’i Madagasikara
Raharaha Ravatomanga : Mitafy henatra ny Bianco